SIYAAD BARRE DADKIISII WAA DABA SOCDAA, WELI MA DHIMAN!!!
Waxey aheyd goor galab dheer ah waxaana fadhinay maqaaxi ku taala xaafada Wembley ee galbeedka London markaan ku baraarugnay nin nasoo agfariistay kuna qeylinaya “SIYAAD BARRE DADKIISII WAA DABA SOCDAA, WELI MA DHIMAN” ninkan oo maskax ahaan xanuunsanaa ayaa intii aanu goobta fadhinay ku celcelinayey ereygaas.
Ragii meesha fadhiyey ayaa badankood u muuqdeen kuwo ka carooday ninkan sheekada ka qasay, balse aniga dhibkaasba ima hayn walow aan hoosta iska iri “tolow yaa naga aamusiya ninkan waalan”.
Saacado kadib, markii aan gurigeyga ku laabtay goor habeen ah oo aan sariirta tegey ayaa waxaa igu soo dhacay ereyadii uu ninka xanuunsani la qeylinayey. Waxaan isku dayey inaan iloobo oo aan hurdo iska daydayo, balse waxaa maskaxdeyda ka faaruqi waayey erayadaas.
Waxaan markiiba is weydiiyey 12 sano kadib burburkii taliskii Ina Siyaad iyo 8 sano kadib geeridiisii sababta keentay inuu ninkan xanuunsani la qeyliyo erayadaas aan soo xusay.
Feker dheer kadib waxaa ii muuqday muhiimad aan is iri wey ka dambeysa qeylada ninka waalan:
Guud ahaan bini aadamku wuxuu maraa marxalado kala duwan oo waxbarasho laga soo bilaabo goorta ay hooyadu dhasho ilmaha. Macalinka ugu horeeya ee dhalaanku yeeshana waa hooyada, marxaladaha xigana waa kuwo ardaygu yeesho macalimiin ilaa heerka qaan gaarka, kadibna waxaa xiga marxalad aqoon sare ama xirfad shaqo.
Hadaba waxaa dhab ah in Siyaad Barre ahaa macalin Soomaaliyeed, soo tababaray arday aad u fara badan, kuna guuleystay soo saarida xirfadlayaal badan caana ka ah Soomaaliya.
Xirfadaha lagu bartay dugsiga Ina Siyaad waxaa kamid ah Musuqa, Dhaca, Boobka, Dilka iyo ku Xad-gudubka Xuquuqda Aadmiga. Ragii ka qalin jebiyey dugsigaasna waa kuwa burburiyey guud ahaan wadankeena, kala qeybiyey caasimadii Muqdisho kana dhigay guri dagaal, waa kuwa aasaasay Somaliland, Puntland, Jubaland, iwm.
Ardaydii Ina Siyaad waa kuwa soo bara kiciyey boqolaal kun Soomaaliyeed, badankoodna ku dacdareysan wadamada deriska la ah Soomaaliya. Waa kuwa qarankii Soomaaliyeed u rogay guri qalalaase Waa kuwa sunta laga keenay Yurub iyo Amerika ku aasay xeebaha Soomaaliya Waa kuwa Madaxfurashada u haysta umada Soomaaliyeed una diidan xaqii ay u lahaayeen nabad ku noolaasho Waa kuwa ku shirsan magaalada ELDORET ee cariga Kenya Waana kuwa ka mas’uulka ah xanuunka ninka la qeyliyey erayada aan cinwaanka uga dhigay qormadan.
Dufcadii ugu horeysay ardaydii Ina Siyaad ayaa qalin jebiyey 1978-dii, dufcadii xigtay ayaa qalin jebisey 1982-dii, dufcad kale ayaana qalin jebisay 1990kii, halka dufcadii ugu dambeysayna ay shahaado qaateen burburkii taliskaas kadib.
Ardaydan qalin jebisay ayaa noqday macalimiinta cusub ee soomaalida maanta.
Qof walba oo fayow waxbaa maskaxdiisa ka guuxa taasoo noqon karta xili farxadeed uu horay usoo maray, xili murugo, dhib loo geystay xili hore iwm. Hadaba hadalka kasoo yeeray ninkan waalan ayaa u muuqda mid macno weyn xambaarsan ahna mirihii mudo dheer oo uu la guuxayey dhib uu la kulmay kaasoo aan la garan Karin cidii u geysatay, iyo goortii loo geystay. Ma Macalinkii weynaa xiligii uu majaraha wadanka u hayey mise xiligii ay macalimiinta cusub majaraha inoo qabteen. Ninkan oo aad moodo inuu la waashay dhibkaas soo gaaray ayaad dareemi kartaa inuu dhamaan eedii dusha ka saaray Macalinkii weynaa.
Siyaad Barre dhimay balse dhibka ina haysta ayaa ah macalimiinta iyo dhaxalka uu inooga tegey taasoo ka dhigan “Siyaad Barre Dadkiisii Waa Daba Socdaa, Weli Ma Dhiman.”
QORAALADII HORE EE MAXAMUD Y. GARRE
SSDF & SNM...